Sean Zinsmeister Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Sean Zinsmeister
Sean anoisa hunyanzvi hwekumisikidza, kutumira mameseji uye nzira yekuenda kumusika yeInfer's trove yeinotevera-chizvarwa predictive analytic mamodheru. Kamwe kugutsikana Infer Mutengi iye pachake, Sean akabatana naInfer kubva kuNitro, kambani yeSan Francisco-based gwaro manejimendi software, kwaakagadzira nekutungamira mubairo-unohwina wepasirose timu. Sean akabata madhigirii epamberi kubva kuSuffolk Sawyer Chikoro chebhizinesi uye Northeastern zvakateedzana mukushambadzira zvine hungwaru uye manejimendi manejimendi.
Infer Net Nyowani Inotungamira: Ziva uye Tumira Iwo Akanakisa Anotungamira mu Salesforce
Chipiri, Gunyana 15, 2015 Sean Zinsmeister
Mabhizimusi ari kunetsekana kududzira makomo e data nezve vatengi vavo uye chii chinovasunda. Zvinenge zvisingaite kuona sango kubva pamiti kana vanhu vakatarisa pane yavo system rekodhi vs. kutora njere dzinobatsira kubva kumasaini ese mune akapatsanuka masisitimu seSalesforce, Marketo neGoogle Analytics, pamwe neasina kurongeka masosi kubva pawebhu. Makambani mashoma ane zviwanikwa kana hunyanzvi hwekuchera dhata ravo uye nekushandisa analytics inosarudza